News - Ulo oru uzu nke uzu di ntakịrị ala n'azụ, ịrị elu nke ụlọ ọrụ mgbapụta nke mba m nwere ogologo ụzọ ọ ga-aga
Ruo oge ụfọdụ, mmepe ụlọ ọrụ mgbapụta mba m na-aga n'ihu site na mmali na oke. N'ịbụ ndị iwu mba ndị na-arụ ọrụ dị mma na-arụ ọrụ, ma ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụkpụrụ teknụzụ ka mma nke ukwuu site na iwebata ọtụtụ ụzọ dị ka absorption, mmeghari ohuru na mgbanwe, na mgbaze na ihe ọhụrụ. Karịsịa, ọkwa nke ngwaahịa na-akwado maka ụfọdụ teknụzụ na akụrụngwa mgbapụta erutela ọkwa mba ụwa.
Aghọtara na n'okpuru nduzi nke mkpa ahịa, ngwaahịa mgbapụta nke mba m dị ka nnukwu nfuli nrụgide dị elu nwere ikike ikike ọgụgụ isi nwere ikike zuru oke ewepụtala ma nwee nkwado nkwado maka mpaghara nke ike eletriki, nkà mmụta banyere ọkụ, mmanụ ọkụ, na nchebe gburugburu ebe obibi. Site na nhazighari atumatu nke uzo ihe na mmelite nke ogo oru zuru oke, ike nke ulo oru mgbapụta nke mba m emeela ka oghere di n'etiti mba ndi mepere emepe di nkpa.
Mgbe ịbanye na "Atụmatụ 13 Afọ Iri Ise", mmejuputa nnukwu ụlọ ọrụ injinia agbatịwo, nchekwa nchekwa ume na mbelata ikuku na mpaghara ndị bụ isi aghọwo otu n'ime ọrụ ọrụ. Agha na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ, igbochi mmetọ mmiri na mmetọ mmetọ, na njikwa ọla dị arọ enweela ihe dị omimi, na usoro nke igbochi mmetọ na ịchịkwa mmetọ a na-akwalite n'ụzọ siri ike. Ihe dị mkpa nke ụlọ ọrụ mgbapụta pụtara ìhè.
Data gosiri na nha ahịa ụlọ ọrụ mgbapụta nke mba m na 2017 dị ihe dị ka ijeri 170. Ọnụ ọgụgụ ezughị ezu na-egosi na e nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ mgbapụta 7,000 na mba niile na ihe karịrị ụlọ ọrụ 1,000 karịrị akara ahaziri iche. Site na ịgba ụka nke usoro iwu obodo na nke obodo, atụmanya ụlọ ọrụ ahụ n'ọdịnihu adịghị mma.
Ọganiihu dị ngwa, nlebara anya n'ụwa niile, rụzuru ihe dị egwu words Okwu otuto ndị a bụ nke dabara adaba na ụlọ ọrụ mgbapụta na mba anyị, mana n'azụ okooko osisi ndị na-ama okooko, enwerekwa nsogbu ndị enweghị ike ileghara anya.
Nke mbu, onu ogugu ndi SME buru oke ibu. N'ime usoro mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ mgbapụta ahụ, ụlọ ọrụ mgbapụta pere mpe na nke obere na ụlọ ọrụ mgbapụta ndị nke onwe ha agbapụtawo otu na ibe, ma weghara nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ mgbapụta ahụ. Enweghi ụkọ ụlọ ọrụ buru ibu, na akara na njirimara nke obere ụlọ ọrụ esighi ike, nke na-adịghị enye aka na mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ mgbapụta.
Nke abuo, ahia ahia di ala. Site n'usoro nwayọ nke ahia na nnweta zuru oke, ụlọ ọrụ mgbapụta nke mba m na-aga n'ihu na-eto, mana ikike ahịa nke 100 ijeri yuan dị njikere ịga. E jiri ya tụnyere nnukwu ahịa, ahịa ahịa dị ntakịrị, ahịa kwa afọ nke nnukwu ụlọ ọrụ na-erughị ijeri 10 ma ọ bụ ọbụna ihe na-erughị ijeri 5. Ya mere, enwere mkpa ngwa ngwa iji mụbaa itinye uche na ahịa.
Nke ato, n'usoro nduzi nke obodo banyere “okwu mbido, mgbaze nri, mmikpu ndi ozo, na ihe ohuru ohuru”, ulo oru mgbaputa nke mba m abaara nnukwu uru. Agbanyeghị, na arụ ọrụ n'ezie, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ewebata nwere ole na ole, nke na-eme ka mmepe ụlọ ọrụ mgbapụta nke mba m daba na gburugburu. Enweghi otutu teknụzụ nwere ikike ikike ọgụgụ isi nke onwe.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwaahịa na ụlọ ọrụ mgbapụta nke mba m enwetawo na imepụta onwe ha, enwere ngwaahịa ole na ole nwere ikike ikike ọgụgụ isi nweere onwe ha, yana teknụzụ ndị ọzọ dị n'aka mba ndị mepere emepe, nke mere na ụlọ ọrụ mgbapụta nke mba m nọ n'ọnọdụ dị ala. Ọzọkwa, n'ihi adịghị ike na nyocha teknụzụ bụ isi, mmepe nke igwe dị iche iche na ihe ndị bụ isi na ụlọ ọrụ mgbapụta nke mba m na-ala azụ, bụ nke ghọrọ nnukwu ihe mgbochi mmepe ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-echekwa ihe egwu nke iwepu nke ochie emeputa ikike. Ya mere, ịrị elu nke ụlọ ọrụ mgbapụta nwere ụzọ dị anya ịga. .